Ny torolàlana haingana ho an'ny drafitra fialan-tsasatra any Georgia mandritra ny areti-mandringana
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny torolàlana haingana ho an'ny drafitra fialan-tsasatra any Georgia mandritra ny areti-mandringana
Inona no tena tsy tadiavinao indrindra momba ny tontolo talohan'ny aretina? Apetraho amin'ny mpankafy fitsangatsanganana ity fanontaniana ity ary hiteny tsy an-kijanona momba ny tsy fahitan'izy ireo ny fitadiavana tanàna, nahandro ary kolontsaina vaovao. Na dia nisy fiantraikany tamin'ny lafin-javatra isan-karazany teo amin'ny fiainantsika aza ny valanaretina COVID-19, ny vokany amin'ny drafitry ny dia dia be loatra ka tsy raharahaintsika.
Georgia, miaraka amin'ny haitao mavitrika, ny tontolon'ny tontolo iainana, ary ny tantara isan-karazany, dia manolotra harena ho an'ny olona leo mijanona ao an-trano. Ny fanjakana atsimoatsinanana dia manasongadina fifangaroan'ny tanàna kely mahafinaritra, tanàna tsy misy dikany ary tanàna an-tanàn-dehibe. Misy zavatra voatahiry ho an'ny mpandeha tsirairay.
Fa raha mikasa ny ho any Georgia ianao mandritra ny areti-mandringana, dia hiatrika fanontaniana sy olana maro be ianao.
Azo antoka ve ny mandeha any Georgia ankehitriny? Afaka mitsidika an'i Georgia ve aho na dia tsy vita vaksiny tanteraka aza? Mila manao sarontava amin'ny toerana be olona ve aho? Mila mitondra tatitra fanadinana RT-PCR ratsy ve aho hiditra amin'ny fanjakana?
Topi-maso fotsiny ireo fanontaniana izay hanototra ny sainao amin'ny fotoana hieritreretanao ny mandeha any Georgia. Amin'ity bilaogy ity dia notantananay ny fampahalalana rehetra ilainao mba hankafizanao fialan-tsasatra azo antoka sy feno fahafinaretana any Georgia. Andao jerena.
Inona ny toe-javatra COVID-19 ankehitriny any Georgia?
Ny isan'ny aretina COVID-19 voamarina izay tany Georgia dia nitombo hatramin'ny 5 Jolay 2021, raha ny fanjakana no nahita ny salan'isa ambany indrindra tamin'ny taona. Ny fanjakana dia nitatitra tranga vaovao 7,400 isan'andro isan'andro tamin'ny herinandro lasa. Hitsambikina 25x izany raha ampitahaina amin'ireo isa fito herinandro lasa izay.
Maromaro amin'ireo marary COVID-5,000 efa ho 19 no manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly maro any Georgia. Ny tobim-pahasalamana ao amin'ny fanjakana dia niasa tao 90% ny fahafahan'ny ICU ananany.
Midika ve izany fa tokony hialana amin'ny fitsangatsanganana any Georgia daholo?
Eny, tsy misy fomba mora hamaliana an'io fanontaniana io. Tsara raha sorohina ny karazana fitsangatsanganana tsy ilaina mandritra ny areti-mandringana. Saingy misy fomba hiantohana ny fiarovana anao sy ny fiainanao, na dia misafidy ny handeha ho any Georgia aza ianao izao.
Ahoana ny amin'ny fameperana ny dia any Georgia?
Hatramin'izao fotoana anoratanay izao dia misokatra ho an'ny mpitsangatsangana avy any Etazonia i Georgia. Mandray mpizahatany iraisam-pirenena ihany koa ny fanjakana, mandrara ny firenena vitsivitsy, toa an'i India, Iran, Afrika atsimo, ary Sina. Ankoatr'izay, tsy misy fepetra takiana takiana amin'ny mpandehandeha hizahana quarantine aorian'ny nahatongavany any Georgia.
Ireo mpandeha iraisampirenena dia mbola mila manome tatitra ratsy RT-PCR (tsy mihoatra ny 72 ora) rehefa tonga izy ireo. Tsy misy lalàna toy izany ho an'ireo mpandeha an-trano.
Misokatra ny ankamaroan'ny toerana fizahan-tany, trano fisakafoanana, trano fisotroana, ary orinasa hafa tsy ilaina. Saingy mihena amin'ny fahafaha-mihena ny asany, ary mety nametraka fepetra fiarovana fanampiny COVID-19. Toy izany koa, ny fitateram-bahoaka dia miasa amin'ny fatra voafetra amin'ny ankamaroan'ny tanàna.
Ahoana ny fomba handaminana ny dianao mankany Georgia?
Hanombohana azy dia tsy maintsy tadidinao fa tsy mitsaha-mivoatra ny famerana fitsangatsanganana mifandraika amin'ny areti-mandringana. Hamarino tsara fa manamarina ireo torolàlana farany azo avy amin'ny loharanom-baovao marim-pototra ianao, toa ny Tranokalan'ny CDC. Jereo ihany koa ny vaovao eo an-toerana hanaraha-maso ny toetran'ny aretina COVID-19.
Ireto misy torohevitra fanampiny hanampy anao amin'ny fanararaotana tsara ny dianao mankany Georgia:
Tsidiho ireo toerana tsy dia fantatra loatra
Tsy mila olona hilaza aminao ianao fa ny fomba tsara indrindra hitazomana ilay coronavirus vaovao dia ny miala amin'ny toerana be olona. Ny ankamaroan'ny mpizahatany mitsidika an'i Georgia dia hitodi-doha amin'ireo tanàna malaza, toa an'i Athens sy Atlanta.
Nefa manana zavatra betsaka hatolotra i Georgia. Raha mitady toerana fizahan-tany tony sy mitokana any Georgia ianao dia diniho ny fitsidihana ireo tanàna any ivelany, toa an'i Snellville sy Dahlonega. Ireo toerana ireo dia manome anao topy maso ny fiangaliana kanto an'i Georgia raha mamela anao hankafy ny fialantsasatra amin'ny hafainganam-pandeha.
Azonao atao ihany koa ny mikasa ny fitsangatsanganana any an-tanànan'ny Savannah na ilay Nosy Golden tanteraka. Aza adino ny manamarina ny fameperana ny dia eo an-toerana alohan'ny hamoronana ny làlan-kaleha.
Zahao ny Weather
Mankafy ny toetr'andro i subtropika miaraka amin'ny lohataona mafana sy mafana ary ririnina mangatsiaka. Ny fanjakana dia mora tratran'ny oram-baratra sy oram-baratra. Ary koa, ny toetrandro dia mirona miovaova arakaraka ny tany.
Izany no antony tsara foana ny manamarina ny toetr'andro any Snellville, Dahlonega, Savannah, ary toeran-kafa tianao hovangiana any Georgia. Ho azo antoka fa hankafy fialan-tsasatra feno fahafinaretana sy tsy misy fihenjanana ianao na eo aza ny areti-mandringana.
Mitandrema amin'ny fiarovana anao
Na dia mety tsy manana politikam-panafenana masaka intsony aza ny orinasa maro any Georgia, alao antoka fa manao sarontava ianao isaky ny mitsidika toerana fizahan-tany. Aza adino ny manaraka ny fomba fidiovana an-tanana sy ny fifanarahana lavitra. Raha handeha hisakafo ianao dia alao antoka fa manontany amin'ny trano fisakafoanana ianao momba ny fepetra fiarovana ampiasain'izy ireo ankehitriny.
Na mitady fialan-tsasatra maharitra herinandro na fialantsasatra haingana amin'ny faran'ny herinandro ianao dia manana zavatra hatolotra ho an'ny rehetra i Georgia. Fikarohana ny fameperana farany fitsangatsanganana alohan'ny handaminana ny dia. Zahao mialoha ny toetr'andro mba hisorohana ny olana tsy ilaina mandritra ny dia ataonao. Safidio ihany koa ireo toerana tsy dia fantatra loatra mba hisorohana ireo mpizahatany manahirana tena, ary mankafy fialantsasatra azo antoka sy milamina.